ဂျက်စီကာချာစတိန်းက 'It: Chapter Two' မှာစတားပြောမယ်။ iHorror
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း Jessica Chastain သည် 'It: Chapter Two' တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်
Jessica Chastain သည် 'It: Chapter Two' တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်
by ကယ်လီ McNeely ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2018
ကရေးသား ကယ်လီ McNeely ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2018
အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ် အမျိုးမျိုးအော်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်အမျိုးသမီး Jessica Chastain သည် Andy Muschietti's တွင် ဦး ဆောင်ရန်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်နေသည်။ အခန်း ၂ အရွယ်ရောက် -up, Beverley နားမှာအဖြစ်။
ဤအချက်မှာမည်သည့်အရာမျှလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ကျောက်တုံးပေါ်တွင်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည် Loser's Club ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗားရှင်းများအတွက်ပထမဆုံးသရုပ်ဆောင် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ကြေညာချက်ကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ Variety ၏ရင်းမြစ်များက“ နှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်စီမံကိန်းစတင်ရန် (Chastain) ကိုစတင်ဆွေးနွေးနေကြသည်” ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဇာတ်ကောင်တွေအတွက်အလားအလာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ရိုးရိုးလေးအောင်မြင်မှုရပြီးကတည်းကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာပရိသတ်တွေအကြားစကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည် It's ကန ဦး လွှတ်ပေးရန်။
ငါတို့လိုချင်တယ် ယခင်ကအစီရင်ခံတင်ပြ Chastain ဟာအခန်းကဏ္ingကိုကြည့်နေပြီးပရိသတ်တွေကဒီစိတ်ကူးကိုထောက်ခံနေပုံရတယ် - သူမကို Bev အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပန်ကာလုပ်ပိုစတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ပါရမီရှင်အမျိုးသမီးမင်းသမီးသည် Muschietti နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်များတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသည်ဟူသောအချက်ကိုသုံးသပ်ခြင်း mama - Guillermo Del Toro မှထုတ်လုပ်ခဲ့သော - သူမသည်ထိပ်တန်းပြိုင်ဘက်ဖြစ်မည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
Universal ရုပ်ပုံများမှတဆင့် mama
Muschietti သည်လမ်းညွှန်သို့ပြန်သွားသည် အခန်း ၂ စာရေးဆရာ Gary Dauberman နှင့်အတူ အခါရုပ်ရှင်ဗားရှင်း It ပထမ ဦး ဆုံးအယူအဆရေးဆွဲခြင်းခံခဲ့ရသည်, ထိုစာအုပ်သည် David Kajganich မှဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခဲ့သည်။ Cary Fukunaga (စစ်မှန်သောစုံထောက် Season 1, တီဗီရဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ခုတည်းသောရာသီ၊ ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ Chase Palmer နဲ့ဇာတ်ညွှန်းကိုပြန်လည်ရေးရန်စီစဉ်ထားတယ်။ Fukunaga ထွက်ခွာသွားပြီး Muschietti ကစီမံကိန်းကိုလွှဲပြောင်းယူပြီးသည့်နောက်တွင် Dauberman သည် Muschietti ၏အမြင်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် script ကိုပြန်လည်ရေးရန်ကူညီခဲ့သည်။
များအတွက် script ကို အခန်း ၂ စတင်ရိုက်ကူးရန်နှင့်အတူအကျင့်ကိုကျင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် ဒီနွေရာသီ.
ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တရား ၀ င်လက်မှတ်ထိုးထားသည့်သတင်းများမရှိပါ (ဘီလ်၏ပြန်လာမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည် Skarsgård Pennywise အဖြစ်) ။ ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာမင်းတို့မြင်တွေ့ရတဲ့ပိုစတာတွေကိုပရိသတ်တွေသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
ဒါကပြောနေတာ, သတင်းလာသည်အတိုင်း, ငါတို့သည်သင်တို့ကို posted စောင့်ရှောက်ရန်သေချာပါလိမ့်မယ်! အခန်း ၂ စက်တင်ဘာလ 6, 2019 ရက်နေ့တွင်လွှတ်ပေးရန်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အန်ဒီ MuschiettiITအခန်း ၂ဂျက်စီကာ Chastain
'Black House' သည် 'Panther Black' ဖြစ်စဉ်ကြောင့်နောက်သို့တွန်းပို့ခဲ့သည်
ထိတ်လန့်သမိုင်း၌ဤနေ့: ဖေဖော်ဝါရီလ 20